GO’AAN GORGOR (Decision of Eagle) – Xeernews24
GO’AAN GORGOR (Decision of Eagle)
10. April 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Gorgorku waakan ugu cimriga dheer naflayda duusha ee ay isku bahda yihiin. Waxa uu noolaan karaa ilaa 70sano. Inuu gaadho 70 sano, waxaa horyaalla in uu qaato go’aan adag oo xanuun badan. Gorgorku marka uu gaadho 40 sano waxaa ku baxa ciddiyaha iyo afka oo dabadeedna qalloocsama/laabma Waxaa intaa dheer oo kale baadadka oo ku weynaada. Intuba waxa ay caqabad ku noqdaan ugaadhsiga iyo duulimaadkiisa waayo ciddiyaha iyo afkuba maadaama ay qaloocsameen waxba kuma qabsan karo. Baadadku marka ay kuweynaadaanna waxa ay ku dhagaan shafkiisa deedna waxa ku adkaata duulimaadyada.
Xaaladdaa marka uu joogo labo go’aan ayaa ubbanaan; in uu sidaa ku bakhtiyo (wax ma ugaadhsan karo) iyo inuu maro geedisocod aad uqadhaadh oo qaadanaya 150 maalmood. Geedi socodkaa waxa uu ku bilaabayaa inuu uduulo buur dheer. Waxana uu ku fadhiistaa fiiqa ugu sareeya. Waxana uu bilaabayaa inuu dhagaxa ku xuqo afkiisa iyo ciddiyihiisaba si uu iskaga jaro. Marka uu ku xoqayo waxaa ka daata dhiig aad ufarabadan waxana uu dareemaa xanuun badan. Marka ay ka jabaan kaddib waa in uu haddana sugaa inta ay kuwa cusubi usoo baxayaan. Marka ay usoo baxaan kaddib waa inuu haddana iska rifaa baadadkiisii ku weynaaday si kuwa cusubi ay ugu soo baxaan oo duulimaadka usahlaya.
5 bilood kaddib gorgorku waxa uu dib ubilaabayaa ciyaarihiisii iyo ugaadhsigiisii. Waxana uu nolol kale oo cusub dib ugalayaa ilaa 30 sanoo kale taas oo ka dhigaysa cimrigiisa 70 sano.
Haddaba maanta waxa habboon in aan fahanno waxa loogu baahdo isbaddal? Lababa way noqon kartaa; si looga badbaado khataraha kugu soo aaddan iyo in lagaga baxo hab-dhaqanada dadka aan anfacayn, tabaha iyo xeeladaha duugoobay ee hadda kaddib ammaa mustaqbalka meel aan ku gaadhsiinayn.
Ka deegaan ahaan isbaddalka waxa aan ugu baahanay labadaba. Hadda waxaan ku jirnaa xaalad iyo Itoobiya cusub. Mana ogaan karno xaaladdan cusubi waxa ay wadato. Waji Wanaagsan iyo mid xunba way yeelan kartaa.
Markaa guud ahaan (shakhsi, koox iyo dawlad ahaanba) waxa aan ubbaahanahay inaan isku diyaarino labadaa wajibiba.
Isdiyaarintaasi waa xanuunkii uu maray gorgorku oo kale; waxaana uhorreya isku tanaasul, samir badan, adkaysi, dulqaad iyo iwm si loo helo midnimo soomaaliyeed taas oo ah ta kaliya ee lagu wajihi karo labadaa xaaladood.
Dhanka kale, ka deegaan ahaan, hab-dhaqanada duugoobay waxa ka mid ah
1. In aabiyo hooyo/qaraabo/dawlad uun wax laga sugo (Horumarka, shaqo abuurka iwm)
2. Maaweelooyinka wakhti dhaafiska loo yaqaan
3. Shaqooyinka oo lagu sugo hoygii aad ku dhalatay oo aanan la raadsan (magaalooyinkeena waxa camiran dad meelo kale ka yimid kuna taajiray)
4. Hadaf iyo himilo la’aan si guud ujirta
5. Shaqo yaraysi
6. Maskax musuq ku fikiraysa (short cut)
7. Dareen waddaniyad yari (waxaad mooddaa inuu nagu yaryahay dareenka lahaanshuhu)
Tabaha iyo xeeladaha duugoobay waxaa ka mid ah
1. Baahida shacabka oo aan laga duullin marka wax la qorshayn
2. Qorshaha waxtarkiisa oo aanad sicad ugaranaynin (outcome)
3. Isku-dhaf la’aanta khayraadka dawladda iyo xoogga shacabka
4. Qorshaha oo aanan lagu salaynin baahida iyo awoodda suuqa
5. Isku_xidh la’aanta meesha waxsoosaarku yaallo iyo meesha ay baahidu taallo.
Haddaba ka shacab ahaan iyo dawlad ahaanba waxa loo baahanyahay in aan qaadano geedisocodkaa qadhaadh ee gorgorka si aan ula jaan qaadno ugana faa’iideysano isbaddalka hadda dalka ka hanaqaaday oo aan la imano hab-dhaqan cusub, tabo iyo xeelado cusubo oo aan isku horumarino ka dad ahaan iyo deegaan ahaanba oo aan ka masaxno/saarno maskaxdeena waxyaabahaa kor ku xusan.
Wabilaahi tawfiiq, ta allay noqon.
Xiigasho ; Omar Maydhane.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/gudoomiye.jpg 922 518 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-10 12:19:202019-04-10 12:19:20GO'AAN GORGOR (Decision of Eagle)
Majaajilo Laga Metelay Khilaafka Geelle Arab iyo Geelle Jabuuti. SAWIRRO: Ciidamo Kumaandoos ah oo lagu soo tababaray dalka Turkiga oo maanta...